Duqeymo dheerad ah oo ka dhacay Ciraaq - BBC Somali
Duqeymo dheerad ah oo ka dhacay Ciraaq
Image caption Mid ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in ay qaaday duqeymo dheeraad ah oo dhanka cirka ah oo lagu bartilmaameedsanayo kooxaha jihaad doonka ah ee ku sugan waqooyiga Ciraaq.
Wasaaradda Difaaca ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay in ficilkan ay uga jawaabayeen warar ka soo baxayay xooggaga Kurdiyiinta ee sheegayay in kooxda Daacish ay weerareen dad rayid ah oo jooga meel u dhaw buurta Sinjaar.
Bayaan uu soo saaray hogaamiyaha dhexe ee ciidammada Mareykanka, ayuu ku sheegay in weerrarada cirka ah ay si sax u bartilmaameedsadeen laba baabuur oo hub saarnaa oo ay leeyihiin kooxda jihaad doonka ah ee joogta meel u dhaw tuulada Sinjaar.
Mar sii horreysay waxaa jiray warar aan la xaqiijin oo sheegayay in isla goobtaasi uu ka dhacay xasuuq.
80 qof oo ka soo jeeda qowmiyadda Yaziidiga amaba tiro intaa ka badnaan karta ayaa la shegayaa in la dilay.
Markii uu todobaad ka hor bilowday weerrarada dhanka cirka ah ee uu Mareykanka qaadayo ayaa madaxweyne Obama waxa uu sheegay in arrintaasi ay u sameynayaan waxa uu ugu yeeray inay ka hortagaan xasuuq ka dhaca waqooyiga Ciraaq.
Maamulka madaxweyne Obama, ayaa haddaba wajahaya su'aalo adag oo ku saabsan sida ay isaga joojin karaan inay ku lug yeeshaan duqeyn marka dambe isu badasha colaad weyn taasi oo uu Mr Obama ku celceliyay in aanay jirin xal uu militariga Mareykanka u keenayo dalkaasi.